Shirkadda Semalt iyo Adeegyadeeda
Waxaad leedahay degel internet, xaqiiqdiina waxaad dooneysaa inaad horumariso boggaaga, waxaadna isweydiineysaa istiraatiijiyaddee la adeegsan karaa ama midkee ayaa si gaar ah ugu habboon boggaaga? Ha walwelin; wax kasta oo aannu idiin qorshaynay ayaannu kuu ahayn.
Runtii, ujeedada milkiile ganacsi kasta oo internetka ah waa in la hagaajiyo meelaynta bartiisa / boggeeda bogagga natiijooyinka raadinta. Mowqifka websaydhku waxaa loo arkaa mid fiican marka lagu meeleeyo bogga koowaad ee natiijooyinka raadinta. Tanina suurtagal maahan iyada oo aan la istiraatiijiyad SEO ahayn.
Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, Semalt wuxuu horumariyay adeegyada ugufiican ee dhammaan websaydhada kuwaas oo ah: SEO (kobcinta injineernimada raadinta) iyo falanqaynta Webka. Intaa waxaa sii dheer, Semalt wuxuu bixiyaa laba olole oo SEO ah, sida AutoSEO iyo FullSEO.
Laakiin kahor macluumaadkaas oo dhan, bal aan kuu sheegno waxa Semalt uu yahay; Maxaa iyo Maxaa Semalt sameeyaa. Iyo waxyaabo kale oo badan oo ku saabsan Semalt. Aynu tagno!
Waxaa la aasaasay Sebtember 2013, Semalt waa shirkad casri ah, oo dhakhso u koraya IT-ga. Xaruntiisu waxay ku taal Kyiv, Ukraine. Hay'ad dijital ah oo buuxa, waxaan u fidinnaa ganacsatada, maamuleyaasha webka, falanqeeyayaasha, iyo khabiirada suuq geynta qaabab cusub oo loogu adeegsado ololayaasha websaydh nooc kasta oo ganacsi si wax ku ool ah.
Semalt wuxuu ka kooban yahay koox hal abuur leh, karti leh, firfircoon, iyo khubaro dhiirrigeliya kuwaas oo nolosha u keenay mashaariic badan oo IT guuleysta. Waxaan hagaajinay xirfadaheena muddo hadda ah toban sano waxaanan ku xaqiijin karnaa shaki la’aan in midkeen kastaaba sayidkiisa dhabta u yahay ganacsigiisa.
Dadaalkeenna wadajirka ah wuxuu abuuray mid ka mid ah adeegyada webka asalka ah iyo kuwa hal-abuurka leh. Waanan ku hanweynahay inaan maanta idiin soo bandhigno. Thanks to tikniyoolajiyadan iyo kaalmadeena, waxaad awoodi doontaa inaad garato kartida buuxda ee boggaaga.
Sanado badan oo shaqo iyo falanqeyn kadib, waxaan helnay fahan buuxa oo ku saabsan waxa loo baahan yahay in la qabto, goorta iyo sida. Hadafkayagu waa inaan kaa caawino inaad gaarto heerar cusub, labadaba Google iyo noloshaada. Nagala shaqee guusha guusha la hubo.
Sidaad arki karto, waxaan nahay gebi ahaanba run oo diyaar ayaan u nahay inaan kula shaqeyno waqti kasta oo habeen iyo maalin ah!
Hadda, sidaad waxbadan uga sii ogaatid Semalt , aan u dhaqaaqno waxa ay ku bixiso adeeg ahaan.
Maxaa iyo Maxaa Semalt sameeyaa.
Maxaan qaban karnaa? Ganacsigaaga waxaan u qaadnaa heerka xiga! Waxaan kuu furi doonaa kanaalno suuq geyn oo cusub oo kaa caawinaya inaad ku guuleysato tartanka. Semalt wuxuu ku siinayaa adeegyada ugu fiican ee lagama maarmaanka u ah tixraaca saxda ah ee websaydhkaaga, kuwaas oo ah: SEO iyo Falanqaynta.
Sidaa daraadeed, waa in la ogaadaa in tikniyoolajiyadda SEO ay tahay habka ugu dhaqaale iyo hufnaanta badan ee lagu kordhiyo bartilmaameedka bartilmaameedka iyo iibka. Sidaa darteed, Semalt waxaa ka go'an inuu hagaajiyo muuqaalka bartaada isla markaana ku meeleeyo websaydhkaaga TOP-ga Google. Soo-booqdeyaal badan - lacag badan! Marka Semalt ha kuu raaco adeegyadeeda ugu waaweyn:
Sidee buu u shaqeeyaa geeddi-socodka mashiinka baaristu u shaqeeyaa?
Sida waxkasta oo kaa dhigi kara inaad kasbato lacag badan, SEO waxay noqon kartaa geedi socod adag.
Dabcan, waad raadin kartaa ereyada muhiimka ah waxaadna abuuri kartaa sumcadda SEO-optimized META adiga oo adeegsanaya aaladaha freeware, ka dib fadhiiso oo sug inta sixirku dhacayo. Si kastaba ha noqotee, kani maahan sida natiijooyinka ugu fiican ee SEO loo gaadho.
Habka ugu badan ee sidan loo sameeyo ayaa ah in la shaqaaleeyo xirfadleyaasha iskood u shaqeysta. Si kastaba ha noqotee, ma ogaan kartid inay kuu dammaanad qaadi karaan dhammaystiran.
Hal siyaabo kale, iyo laga yaabee midka ugu fiican ee dadka cusub, waa in la helo hay'ad fulisa SEO-ga ganacsigaaga. Waxaa laga yaabaa inay bixiyaan heer wanaagsan oo ah kor u qaadista gudaha iyo dibadaba, waa wax runtii Google jecel yahay.
Adiga oo la shaqeynaya hay'ad noocaas ah, waxaa lagugu hoggaamin doonaa dhammaan heerarka kala duwan ee SEO-ga dhabta ah:
Eray-bixin (keyword) Cilmi-baaris: Dhamaan keywords looma abuuri doono si siman. Qaar ka mid ah runtii waligood ugama shaqeyn doonaan websaydhkaaga, halka kuwa kale laga yaabo inay si yaab leh ugu shaqeeyaan. Tani waa sababta ay tahay in loogu xulo si xikmad leh.
Kordhinta Farsamo: Marxaladan farsamo waa sida ugu wanaagsan ee bartaada loogu diyaariyey in "dib loo eego" ee matoorada raadinta. Waxay saameyn toos ah ku leedahay fursadahaaga inaad ku guuleysato qadarinteeda.
Kordhinta Dibadda: Kor u qaadista dibedda ama xiriirinta dhismaha. Waxay ku saabsan tahay helitaanka xiriirro kale boggaaga. Intooda badan tixraaca SEO-gu wuxuu u yahay laf-dhabarta istiraatiijiyadda SEO, waxayna umuuqdaan inay saxsan yihiin (gadaal ayaan dib ugu laaban doonnaa intaas).
Horumarinta Dabagalka: Sii wad inaad ku hagaajiso shabakadaada booqdayaasha. Hadday jecel yihiin, matoorada raadinta ayaa isla sidaas sameyn doona.
Hadda laga bilaabo, ganacsi kasta oo khadka tooska ah waa inuu ku fiicnaadaa websaydhada u gaarka ah makiinadaha raadinta illaa xad ama ka yar. Haddii, dabcan, ay ka walwalaan dakhligooda iyo joogtayntooda.
SEO waa waxaas oo dhan sababta oo ah waxay ku riixaysaa socodka dabiiciga ah websaydhada websaydhkaaga waxayna "aasaaska dhigaysaa" si ay u xoojiso jiritaankaaga khadka tooska ah.
Macluumaad la'aan ayaa kuu horseedaysa jahwareerka ganacsigaaga. La socodsii oo kontoroolka ganacsigaaga! Maalin kasta, waxaan ku siinnaa xog lafa-gur oo ku saabsan horumarkaaga.
Maalin kasta, waxaan falanqeynaa mawqifka goobta iyo kormeerno horumarkooda. Xaqiiqdii, Semalt waxay aruurisaa macluumaadka tartamayaashaada, dabcan kaliya haddii aad go'aansato inaad kormeerto boggooda.
Si ka duwan bogagga kale, waxaan cusboonaysiinaa booskaaga si joogto ah, annagoo ku siinayna fursad qaas ah inaad ku raacdid jagooyinka goobtaada internetka wakhti kasta oo maalinta ah oo aad aragto isbeddelada ugu dambeeyay.
Dhamaan falanqaynta waxaa lagu soo bandhigi doonaa iyada oo loo marayo warbixin faahfaahsan oo falanqeyn ah oo loo beddelay qaab PDF oo aad kala soo bixi karto boggaaga. Warbixinta waxaa loo diri karaa cinwaanka e-maylka ku qoran. Tani waxay ku siinaysaa fikrad cad oo ku saabsan horumarkaaga.
Xaqiiq ahaan, la dagaallanka inuu ugu sarreeyo Google waa muhiim. Si kastaba ha noqotee, waa mid aad u muhiim ah inaad booskaaga ka dhigtid weligiis meesha ugu sarreysa, maadaama tartamayaashaadu ay kuu eryanayaan sida libaaxa gaajaysan. Si looga hortago inaad ku dhacdo dabinkaan, waxaan sameynay falanqeynteena internetka.
Runtii, falanqeeyeyaasha websaydhadeena ayaa ah adeeg falanqayn xirfad leh oo loogu talagalay mulkiilayaasha websaydhada oo albaab u furaya fursado cusub oo lagula socon karo suuqa, si loo hubiyo labadaba jagooyinkaaga iyo tartamayaashaaga iyo xogta falanqaynta ganacsiga.
La ogeysiiyo. Bilow inaad isticmaasho falanqeeyayaasha shabakada hadda!
Falanqaynta waxaa ka mid ah:
Fikradaha furaha ereyga: Waxaan kaa caawinaynaa inaad xulato ereyada furaha ganacsi ee ugu habboon.
Taariikhda meeleeyaha : Eeg oo falanqee mawqifyada furahaaga ereyga waqti ka badan.
Meelaha ereyga furaha ah: La socodka maalinlaha ah ee jagooyinka boggaaga ee nidaamka mashiinka raadinta.
Sahaminta Tartanka: Soo baar oo baar falanqaynta jagooyinkaaga mashiinka raadinta.
Xakameynta astaantaada: Macluumaadkan falanqaynta ah wuxuu soo bandhigayaa heerkaaga caanka ah, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad horumariso siyaasad iskaashi oo karti leh.
Falanqeeyaha Websaydhka: Falanqayn dhameystiran oo ku saabsan u hoggaansanaanta boggaga ee horumarinta bogga iyo shuruudaha wershadaha SEO.
Waa kuwee ololayaasha SEO ee bixiya Semalt?
Sidaan u sheegnay, Semalt wuxuu bixiyaa laba olole oo SEO ah, sida AutoSEO iyo FullSEO. Aan kuu sheegno oo ku saabsan iyaga hadda!
Xaqiiqdii, ololahan waxaa loogu talagalay dadka doonaya inay kordhiyaan iibkooda internetka iyagoo aan aqoon u lahayn SEO-ga, isla markaana aan dooneynin inay lacag badan gashadaan iyagoo aan helin natiijooyin. Markaa ololaha AutoSEO waa ololaha ugu fiican adiga. Ogow sababta.
Maxaad ugu baahan tahay AutoSEO?
Ololayaasha AutoSEO waxay horey u caddeeyeen dhowr goobood, markaa ha ka reebaynin goobtaada. Soo hel natiijooyinka AutoSEO:
Wax kasta ayaa lagu soo daray ololahan, AutoSEO waxaa ku jira:
Xulashada ereyada furaha ee ugufiican
Dhisidda xiriiriyeyaal goobo wanaagsan
Ka raadi bogag internet
Hadda, waxaa la joogaa waqtigii la bilaabi lahaa kobcinta SEO-ka iyo in la wanaajiyo qiimeyntaada Google ee AutoSEO.
Xulashada ereyga furaha ee dhiirrigelinta SEO
Bilaabida ololaha dhismaha iskuxirka
Taageero maamule shaqsiyeed
Xayeysiinta SEO meel kasta iyo luuqad kasta
XULASHO QORSHAHA ADEQUATE EE Ujeedooyinkaaga, Semalt wuxuu leeyahay 1 sano, 6 bilood, 3 bilood, iyo xitaa rukumada 1-bilood ah , maxaa yeelay Semalt wuxuu la jaan qaadayaa dhammaan miisaaniyadaha.
FullSEO , waa hab horumarsan oo lagu biiro TOP-ga Google. Runtii, waxay ku lug leedahay hawlgallo badan oo ku saabsan kor u qaadista gudaha iyo dibedda ee boggaaga, iyagoo ku siinaya natiijooyin aad u wanaagsan waqti aad u gaaban.
Si aad u gaarto meesha ugu sarreysa Google, waxaad u baahan tahay waqti iyo ilo. Si kastaba ha noqotee, waxaan horumarinnay istiraatiijiyooyin aad u horumarsan oo SEO ah oo kuu oggolaanaya inaad kordhiso dhagaystayaasha, iskuxirka taraafikada, iyo iibinta shabakaddaada waqtiga ugu gaaban ee suurtagalka ah ee la socda "FullSEO "
Marka, shaki la'aan, waxaad bilawdaa olole buuxa oo ah barnaamijkaaga hadda oo aad jidkaaga u tagto TOP-ga Google!
FullSEO waa olole dhammaystiran oo wax ku ool ah oo ka caawinaya meheraddaada inay kobocdo waqtiga ugu gaaban ee suurtagalka ah si loo kordhiyo dhagaystayaasha websaydhka oo leh heer waxyar ka sarreeya SEO:
DIIWAAN GALINTA MAGAALADA
Marka loo qaato FullSEO, maxaad helaysaa?
Kor u qaadis heer sare ah
Maalgashi faa iido leh
Natiijooyinka muddada-dheer ee dhakhso leh oo wax ku oolka ah
Semalt wuxuu leeyahay boqolaal macaamiil oo qanacsan
Ilaa iyo 2013, falalkayada oo dhan waxaa loogu talagalay hagaajinta howlaha internetka ee macaamiisha badankeena. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan qayb ka nahay guushahooda. Halkan ka arag ku qanacsanaanta wejiyada macaamiishayada iyada oo loo marayo marag furayaashooda : +32 maragyada fiidiyowga, +146 marag fur qoraal ah, iyo +24 kiis.
Sidoo kale waad ka mid noqon kartaa macaamiishaas qanacsan
Dabcan, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad ka mid noqoto macaamiishaas qanacsan, marka waa suurtagal. Semalt wuxuu diyaar u yahay inuu kugu raaco booskaaga imminka iyo darajadaada 10ka sare ee mashiinka raadinta Google. Tani waxay ahayd kiiska, tusaale ahaan, Mr Greta, madaxa shirkadda Zaodrasle, kaasoo si weyn ugu koray adeegyada SEO Semalt. Waa tan waxa uu ka sheegay waaya-aragnimadiisa Semalt: "Adeeg aad u wanaagsan! Waan ku qanacsanahay, hits organic ah ayaa sii kordhaya; isaga, oo iyagu sidaa uma ay fiicnayn. »
In ka yar 5 bilood oo ololaha SEO ah, waxaan ku guuleysanay inaan sii wadno horumarka oo aan hubinno in Zaodrasle uu ka heli karo aasaasiga Google TOP-5 iyo TOP-3. Halkan guji si aad u aragto natiijooyinka:
Markaa haddii aad xiisaynayso natiijooyinkan, waxaad booqan kartaa bartayada internetka oo aad ka heli kartaa macluumaad badan oo ku saabsan macaamiisheena. Kiisaska waxaa laga heli karaa halkan.
Aad ayey muhiim u tahay in la ogaado in Semalt uu yahay shirkad khibrad leh oo leh wax ka badan 16 sano oo waayo-aragnimo SEO ah oo leh koox ka kooban 120 khubaro ah. Marka waxaan xiriir joogta ah la leenahay macaamiisheenna si aan si otomaatig ah uga jawaabno baahi kasta oo uga imaanaysa iyaga. Marka, websaydhkeena, waxaad kula kulmi kartaa kooxdeena wakhti kasta.
Carqalad luqadeed kuma lahan Semalt
Ma jiro wax carqalad ku ah luuqada, sababtoo ah luuqad kasta oo aad ku hadasho, maamulayaashayagu runti waxay kuu heli doonaan luuqad caadi ah. Ka dib oo dhan, waxaan ku hadalnaa Ingiriis, Faransiis, Talyaani, Turki, iyo luqado kale oo badan.
Xaqiiqo xiiso leh oo ku saabsan Semalt ama sheekada Turbo
Sannadkii 2014 waxaan u guuraynay xafiis cusub oo waxaan ka helnay dheriga ubaxa duugga ah. Milkiilaha xafiiska hore wuu ka tagay wuuna diiday inuu qaato. Markaa waxaan u dhaafnay kunkii oo aan ugu yearnay dambe Turbo. Waxaan ogaanay sida loo quudiyo oo loo daryeelo qambeyaasha, xawaaraha xafiiskayaga cusubna wuxuu u guuray barkad ballaaran oo ballaaran. Tan iyo markaas, wuxuu noqday masoorkeena.